श्रीमतीसंग राति संगै सुतेर बिहान ‘मर्निङवाक’गर्न गइ फर्किंदा जव मुना भुइँमा लडेको देखे कार्कीले !
नेपाल प्रहरीले पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीकी श्रीमती मुनाको ह त्या भएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक प्रहरी अधिकृतका अनुसार उहाँको ह त्या भएको आशङ्कामा घरको सिसीटिभी फुटेजलगायत अन्य प्रमाणको अनुसन्धान भइरहेको छ ।
ललितपुरको सानेपास्थित आफ्नै घरको भान्साकोठामा बिहान अ चेत अवस्थामा भेटिनुभएकी कार्कीको उपचारका क्रममा स्टार अस्पतालमा निधन भएको थियो । उहाँको टा उकामा लागेको ग म्भीर चोटका कारण निधन भएको हो । चिकित्सकका अनुसार घाँ टी र हातमासमेत नी”’लडाम भेटिएको छ । घटनाका समयमा पूर्वसचिव कार्की ‘मर्निङवाक’मा निस्कनुभएको थियो ।
सोही घरमा कामदारका रूपमा बसेका विजय चौधरी भने घरको ‘डाइनिङ’ कोठामा झु”’ण्डि”एको अवस्थामा मृ’त फेला परेका थिए । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उहाँको ह”’त्यामा स्वयं चौधरीको संलग्नता देखिएको जनाइएको छ । घटना घटाएर उनले देहत्याग गरेको अनुमान छ तर प्रहरीले घटनाको औपचारिक जानकारी गराएको छैन ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले घटनाको अनुसन्धान भइरहेकाले त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै यकिन कारण भन्न सकिने जानकारी दिनुभयो । महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रहरी उपरीक्षक दुर्गा कार्कीले दुवै वटा श व परीक्षणका लागि पाटन अस्पतालमा पठाइएको र सिसी क्यामेराको फुटेजलगायत अन्य प्रमाण सङ्कलन गरेर फोरेन्सिक ल्याबमा परीक्षण भइरहेको जानकारी दिनुभयो । अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार मुनालाई शुरुमा ल’छा’रप’छा”’र गरी ल’ढा”एर पि”’र्काले हा”नेको देखिएको छ ।
कार्कीका घरभित्र राखिएको सीसीटीभीलेसमेत यो दृश्य कैद गरेपछि प्रहरी उक्त निस्कर्षमा पुगेको हो। ‘बिहान नौ बजेतिर विजयले मुनालाई पि’र्का’ले हि”र्का”ई भु”इँमा ल”डा”एको देखिन्छ,’ अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकृतले भन्नुभयो,‘ भु”इँमा मुना ल”डे”पछि कपाल समातेर टा”उको ब”जा”रेको देखिन्छ। विजयले नै ह”त्या गरेको योभन्दा अरु प्रमाण हुन सक्दैन।’ तर विजय र मुनाबीच के कुराको ख’टप’ट थियो भन्नेमा प्रहरीले केही खुलाएको छैन।
कार्कीले आफन्त र प्रहरीसँग बताउनुभए अनुसार उनी पशुपतिनाथ मन्दिर गएर फर्किएपछि यो घटना भएको थाहा पाउनुभएको थियो। दुई छोरी र एक छोराकी आमा मुनाको ह त्या के कारणले गरियो भन्नेबारे प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। अर्जुनले बताउनु भए अनुसार मुना अ चेत अवस्थामा ल’डि’रेहेकी थिइन्। उनले तत्काल प्रहरीमा खबर गरेपछि घटनास्थलमा प्रहरी पुगेर मुनालाई उपचारार्थ सानेपास्थित स्टार हस्पिटल पुर्‍याइएको थियो। तर, मुनाको निधन भएको थियो।
अर्जुनको घरमा सुत्ने कोठा र बाथरुम बाहेक अन्य स्थानमा सीसीटीभी छ। प्रहरीले अर्जुनको भनाइ, घरमा काम गर्ने अन्य कामदार र सीसीटीभीलाई नै आधार बनाएर अनुसन्धान दायरा फराकिलो बनाएको छ।
प्रहरी घटनास्थलमा पुग्दा मुना भान्सा कोठामा र ग ता म्य भएर ल डि र हेकी थिइन् भने कामदार विजय नाइलनको डो रीले पा सो लगाएको अवस्थामा डाइनिङ टेबलमा ल डि र हेका थिए। प्रहरी पुग्दाको अवस्था र अर्जुनले प्रहरीमा दिएको जानकारी दुरुस्त मिले पनि मुनाको ह त्या र विजयको देहत्यागको प्रसंग खुल्न सकेको छैन।
महानगरीय प्रहरी अ पराध महाशाखा र ललितपुर प्रहरी परिसरले संयुक्त रुपमा अनुसन्धान थालेका छन्।
सिसिटिभी फुटेजमा के के देखियो ?
१० बजेर २३ मिनेटमा चौधरीले मुनाको टा उकोमा केही चिजले सा तपट क हि र्का एको पनि सिसिटिभी फुटेजमा देखिएको छ। त्यसपछि करिब ४५ मिनेटसम्म उनी घटनास्थलमै ओहोरदोहोर गरिरहेको देखिएको छ। सिसिटिभी फुटेजअनुसार ११ बजेर ८ मिनेटसम्म उनी किचेनमा ओहोरदोहोर गरिरहेको देखिएको छ।
११ बजेर २० मिनेटमा पूर्वसचिव कार्की घरमा आइपुग्दा चौधरी झु न्डि ए को अवस्थामा देखिए भने मुना किचेनमा ल डि रहेका थिए।
१० बजेर १० मिनेटमा मुनालाई घाँ टीमा डो रीले न्याँ केर ल डा उनुअघि पनि किचेनबाहिर चौधरी ओहोरदोहोर गरिरहेको सिसिटिभी फुटेजमा देखिएको छ।
१० बजेर १० मिनेटमा मुनालाई घाँ टीमा डो रीले न्याँ के र ल डा ए पछिको १३ मिनेटसम्म चौधरीले के गरे भन्ने चाहिँ खुल्न सकेको छैन। चौधरीको ‘अन्डरवेयर’मा र गत र वि र्य ल त्पति एको देखिएको छ। पूर्वसचिव पत्नी मुनाको मा सिकश्रा व चलिरहेको पनि प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ।